Accueil Ny Mpitandrina Fampianarana Hebreo 13 :8
Maro ny toe-javatra nandreraka, nahavery fanantenana teo amin’ny fiainanao manokana, na teo amin’ny ankohonana, na teo amin’ny fiaraha-monina, eny na teo amin’ny fiangonana aza. Matoa anefa ianao mbola nahatratra izao taona vaovao 2006 izao dia noho ny fitiavan’Andriamanitra lehibe anao, Izay nanome an’I Jesoa Zanany hamonjy ny olony ho afaka amin’ny fahotana (Matio 1:21). « Jesoa Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay »( Hebreo 13 :8 ).
Jesoa : Andriamanitra no Mpamonjy ; Anaran-tsoa tokoa, fa mifono ao ny zava-tsoa rehetra ilainao enti-mamakivaky ity taona vaovao ity, araka ny sitrapon’Andriamanitra : « Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanaky ny Avo.izay rehetra mino Azy dia tsy ho very, fa hanana fiainana mandrakizay » ( Jaona 1 :12 ; 3 :16 ). Koa raha manomboka ity taona vaovao ity ianao, dia matokia sy manàna fanantenana fa ho sambatra raha ao anatinao Jesoa, satria Sakaiza tsy mahafoy, Mpamonjy mahavonjy mandrakizay, ary tokin’aina velona tokoa na amin’ny fiainana , na amin’ny fahafatesana Izy.
Miovaova izao rehetra izao hoy ny tononkiram-panahy, fa Jesoa Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ; Vatolampy tsy mivadibadika, manda fiarovana ho anao. Ry havana malala ! tsy ho irery ianao, fa ny Tompo dia efa mialoha làlana anao eo amin’izao tontolo izao ka ho tanteraka aminao anie ny teniny hoe : « Indro, Izaho momba anao ka hiaro anao amin’izay làlan-kalehanao rehetra.fa tsy handao anao Aho »( Gen 28 :15).
« Mitandrema, miambena, ka mivavaha ; fa tsy fantatrareo izay hihavian’ny fotoana »(Marka 13 :33)
Misaotra sy midera, mankalaza ary manome voninahitra lalandava an’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompo sy Lohan’ny Fiangonana isika noho ny fahasoavany izay ahafahantsika miaina izao taom-piangonana vaovao izao. Manomboka amin’ity andro anio ity ( 27 Novambra ) tokoa mantsy dia miditra amin’ny vanim-potoanan’ny Adivento isika vahoakan’Andriamanitra. Eo amin’ny fiainana andavanandron’ny fiaraha-monina, dia manomboka mirenty sahady ny tsenambarotra sy ny dokam-barotra samihafa isarihana ny fo sy ny safidin’ny mpanjifa na ny mpihinana ; ny làlana sy ny sakeli-dalana samihafa eran’ny tanàna dia voaravaka sy marevakin’ny jiro mamiratra maro loko samihafa. Izany no manambara fa efa manakaiky ny krismasy na Noely ; ka na ny kely na ny lehibe dia samy efa tsindrian-daona avokoa, manonofy izay mety ho anjara fanomezana ho azo noho izany fety na andro malaza izany : Inona re no fanomezana ho ahy amin’ity Noely na krismasy ity ? Raha dinihina izany fanontaniana izany, dia lasa ny fisainana fa toa adinon’ny olona velona amin’izao fotoan’androtsika izao ny tena antom-pisiana sy ny maha-zava-dehibe ary ny lanjan’ny Krismasy na Noely.
Ny Fiangonana sy ny mpino kristiana raha miditra amin’izao vanim-potoanan’ny Adivento izao dia miomana am-pifaliana amin’ny tononkiram-panahy sy ny fisaorana ary ny fivavahana satria ny Adivento dia fotoana iantsoan’Andriamanitra ny tsirairay avy sy ny vahoakany manontolo ho amin’ny famonjena. Eny ny famonjena antsika dia avy amin’Andriamanitra Ilay Mpanao antsika : « Tompo ô, Ianao no Rainay, Ianao Ilay nantsoina hatrizay hatrizay amin’ny anarana hoe Mpanavotra anay »( Isaia 63 :16) ; izany hoe Andriamanitra Mpanavotra sy Mpamonjy ny olony, dia ny olona izay manaraka sy mankato ny sori-dàlana sy ny sitrapon’Andriamanitra. Tonga nofo ka nitafy ny endrik’olombelona Andriamanitra. Mamangy ny olony Izy, izany no Vaovao Mahafaly na Teny soa Mahafaly toriana sy hambara ka zaraina amin’ny olombelona rehetra.
Amin’ny fiaraha-monina izay tsy mitsahatra miezaka mampiena ny fotoam-piandrasana sy mampitombo tombom-potoana, ny Tenin’Andriamanitra dia mitaona sady mampahery ny Fiangonana sy ny kristiana ho mahatoky amin’ny fiandrasana ny Tompo sy Mpamonjy azy ; ho Fiangonana sy kristiana miorina sy mamaka tsara hatramin’ny farany amin’ny finoana ka tsy hanan-tsiny amin’ny andro hiavian’i Jesoa Kristy ( I Kor 1 :8). Efa be fandrosoana sy be fiovana izao androtsika izao. Misy ny firenena tsy ahitana intsony fiorenana amin’ny finoana sy ny fivavahana ; ao ny mandroaka mihitsy tsy ho amin’ny taniny ny fivavahana amin’Andriamanitra Mpahary izao hary rehetra izao. Mahazo laka ny herin’ny maizina, miomana sy miasa fatratra mandrava izay rehetra naorina ao amin’ Andriamanitra, ary miezaka araka izay fara heriny handroaka Ilay Masin’Andriamanitra sy ny voahosony.
Maro no mikely aina hiaro ny fiadanana sy ny filan’ny nofo. Fa ho anao izay efa nantsoin’Andriamanitra iomnbona amin’ny Zanany Malalany, dia Jesoa Kristy Tompo, meteza iombona fanahy amin’I Davida ka ho sahy hijoro ho vavolombelon’ny finoana ka hiventy hoe : « Aminao Tompo ô no anandratako ny fanahiko. Andriamanitro ô ! Ianao no itokiako, aoka tsy ho menatra aho ..Eny , tsy hisy ho menatra izay rehetra miandry Anao »( Salamo 25:1-3). Eny tsy ho menatra tokoa izay rehetra miandry ny fihavian’ny Tompo sy Andriamaniny. Fa mainka aza mampiteraka sy mampitombo ao anatiny ny faniriana lalina, ny hetaheta te ihaona amin’Ilay Mpamonjy Soa, dia Jesoa Zanaky ny Ray eo amin’ny hajany sy ny voninahiny. Raha ho avy Izy dia handray ny olony ho amin’ny Fanjakany mandrakizay. Koa miandrandrà ry Fiangonana malala, fa akaiky ny maraina ! Ry mino rehetra, esory ny toetra maizina, ario ny asan’ny nofo. Sikino fahamarinana sy fahamasinana ny valahanareo, fa akaiky ny Mpanavotra antsika. Miareta tory, miandrandrà fa ho avy faingana Izy.
Koa ahirato ny maso, sokafy ny fo sy ny fanahy, hahita sy handray an’Ilay Andriamanitra Tonga nofo mamangy sy miara-monina amin’ny olony.Ary eo am-piandrasana ny fahatongavany dia mitandrema, miambena, ka mivavaha..Voninahitra ho amin’ny Avo Indrindra ho an’Andriamanitra, ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany. Amena
RAZAFIMAHATRATRA Marcellin, Mpitandrina Mpandrindra ny Tafo FPMA Melun